Fironana vaovao amin'ny Apple miaraka amin'ny tariby HomePod | Avy amin'ny mac aho
Fironana vaovao amin'ny Apple miaraka amin'ny tariby HomePod
Peter Rhodes | | Accessories, Solosaina Mac
Tamin'ny fahatongavan'ny HomePod, ny basy fanombohana dia nomena izay mety ho lahasan'ny Apple amin'ny vokatra manaraka. Rehefa miteny an'izany izahay dia miresaka ny fomba fanamboarana ny HomePod dia tena tsy mitovy amin'ny zavatra hitantsika amin'ny vokatra hafa toy ny iPhone na Mac izay misy asa lehibe kokoa noho izany ny fikolokoloana ireo vokatra ireo dia azo atao. , tsy toy ny HomePod izay raha te hiditra ny atiny dia mila manimba azy ara-bakiteny ianao.
Ny zava-baovao iray hafa amin'ny fizotry ny famokarana HomePod dia ny tariby fifandraisana amin'ny tamba-jotra elektrika sy ny fomba anatonana azy. Inona no antony tsy maintsy apetrak'i Apple tariby izay tsy azo esorina toy ny amin'ny vokatra hafa?
Tsy fantatsika hoe inona ny antony nanapahan'i Apple hevitra, amin'ny endrika famolavolana, fa ny tadin'ny herin'ny HomePod tsy azo esorina fa amin'ny alàlan'ny fitaovana nanaovana azy dia afaka mahazo hevitra isika. Raha mijery akaiky ianao, ny tariby HomePod dia tsy vita amin'ny famaranana izay ananan'ny taribin'ny vokatra Apple hafa, izany hoe amin'ny fingotra fotsy na volondavenona na mainty toy ny amin'ny iMac Pro maoderina.
Amin'ity tranga ity, ny tariby HomePod dia rakotry ny harato lamba izay manome endrika premium sy be mangatsiaka kokoa noho ny mety ho taribin'ny iMac. Ny HomePod dia vokatra izay hapetratsika amin'ny toerana hita be ao an-tranontsika ary Apple dia nieritreritra fa tokony hanana kalitao kely kokoa izy io. Fa ... maninona no tsy esorina? Mety hieritreritra isika fa raha azo esorina ny tariby misy an'ity fomba ity dia mety hanimba ny haratony amin'ny fametrahana azy amin'ny toerana tsy mendrika isika. Raha mijanona amin'ny anchor amin'ny HomePod izy dia ho foana araka ny tokony ho izy, izany hoe, tsy manosotra tariby hafa na mifangaro amin'ny vokatra hafa. Tsy haiko fa io ihany no azoko eritreretina satria tsy hitako ny fanazavana. Mieritreritra ve ianao fa mety ho nisy antony naharesy lahatra izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » Fironana vaovao amin'ny Apple miaraka amin'ny tariby HomePod
Espace5530 dia hoy izy:
Raha azo esorina izy io, manontania momba ilay fitoeram-pako …….
Matahotra ianao dia hoy izy:
TSY azo esorina izy io, ny tokony hampahafantarina anao dia ianao.
Ny olona ao amin'ny iFix dia efa nanamarina izany, TSY azonao disassemble ny tariby
Salama Alfredo. Mino aho fa ianao no mila manamarina vaovao. Ny hoe ny tariby dia azo esorina amin'ny yank izay efa saika vakinao mba hanaovana izany dia tsy midika hoe vonona ho azy izy ary tonga tampoka izany. Misaotra namaky anay.
Ampahafantaro ny tenanao alohan'ny azafady, olona maro no hamaky anao fotsiny.
Salama Miguel. Mino aho fa ianao no mila manamarina vaovao. Ny hoe ny tariby dia azo esorina amin'ny yank izay efa saika vakinao mba hanaovana izany dia tsy midika hoe vonona ho azy izy ary tonga tampoka izany. Misaotra namaky anay.
Manu Iglesias dia hoy izy:
Heveriko fa mety misy ifandraisany amin'ny zava-misy fa fitaovana noforonina mba ho eo amin'ny toerana iray ihany izy io nefa tsy mihetsika. Ny fanesorana mpampitohy dia heveriko fa hitahiry vola kely amin'ny famokarana (izay an-tapitrisany tapitrisa ny vola dia ho vola be) ary hataoko "saika" raikitra (azo esorina izy io, fa araka ny ahitanao ireo horonantsary navoakan'izy ireo anao mila mampiasa hery be dia be) hisoroka ny fahatapahana an-tsitrapo noho ny hovitrovitra sy ny hafa ...
Mamaly an'i Manu Iglesias